ငါးမွေးမြူရေး စခန်းနှစ်ခုနှင့် ရေယာဉ်လွန်းကျင်း လုပ်ငန်းတစ်ခုကို B.O.T စနစ်ဖြင့် နှစ်ရှည် ငှာ - Yangon Media Group
ငါးမွေးမြူရေး စခန်းနှစ်ခုနှင့် ရေယာဉ်လွန်းကျင်း လုပ်ငန်းတစ်ခုကို B.O.T စနစ်ဖြင့် နှစ်ရှည် ငှာ
မအူပင်ဝါးတော ငါးမွေးမြူရေးစခန်းအပါအဝင် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနလက်အောက်ရှိ ငါးမွေးမြူရေးစခန်းနှစ်ခုနှင့် ရေယာဉ်လွန်းကျင်းလုပ်ငန်းတစ်ခုကို B.O.T စနစ်ဖြင့် နှစ်ရှည်ငှားရမ်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။ စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ငါးလုပ်ငန်း ဦးစီးဌာနလက်အောက်ရှိ မအူပင်ဝါးတော ငါးမွေးမြူရေးစခန်း၊ လှပဒါးငါးမွေးမြူရေးစခန်းနှင့် ရေယာဉ်လွန်းကျင်းလုပ်ငန်းတို့ကို စီးပွား ရေးအရအကျိုးရှိစွာအသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် B.O.T စနစ်ဖြင့် နှစ်ရှည် ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီး လက်ရှိစိတ်ဝင်စားသော ကုမ္ပဏီများ၏ အဆိုပြုလွှာများကိုတောင်းခံထားရှိကြောင်း သိရသည်။
ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ”ဒီစခန်းတွေကို ပုဂ္ဂလိက ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင် အခုထက်ပိုပြီး ကောင်းမွန်လာမယ်။ စီးပွားရေးအရလည်း အကျိုးရှိစွာအသုံးချလာနိုင်မယ်။ ဒါကြောင့် နှစ်ရှည်ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုဖို့အဆိုပြုလွှာ ဖိတ်ခေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပြုလွှာကို ဒီဧပြီလကုန်အထိနောက်ဆုံးထားပြီး ရုံးအမှတ် (၃၆)၊ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၊ စီမံရေးရာဌာနစုကို တင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ် ” ဟု ဧပြီ ၇ ရက်က ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ပြောသည်။
မအူပင်ဝါးတောငါးမွေးမြူရေးစခန်းသည် ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး မအူပင်ခရိုင် မအူပင်မြို့နယ်တွင်တည်ရှိကာ မြေဧက ၃ဝဝ ကျယ်ဝန်းပြီး လှပဒါးငါးမွေးမြူရေးစခန်းသည် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊ မှော်ဘီမြို့နယ်၊ လှပဒါးကျေးရွာတွင် တည်ရှိကာ မြေဧက ၂ဝ၁ ဒသမ ၇၈ ဧကကျယ်ဝန်းကြောင်း၊ ရေယာဉ်လွန်းကျင်းလုပ်ငန်း သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် ဂျောင်ဝိုင်း ကျေးရွာတွင်တည်ရှိကာ မြေဧက ၂၇ ဒသမ ၉၇ ဧက ကျယ်ဝန်း ကြောင်း သိရသည်။
၎င်းက”အဆိုပြုလွှာတွေကို ဧပြီ ၂၄ ရက်အထိ ရုံးချိန်အတွင်း စီမံရေးရာဌာနစုမှာ အခမဲ့ထုတ်ယူနိုင်ပြီး ဧပြီ ၃ဝ ရက်နောက်ဆုံးထား တင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သတ်မှတ်အချိန်ထက် နောက်ကျတင်ပြတဲ့ အဆိုပြုလွှာတွေကို လက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူး” ဟုပြောသည်။ ပြည်တွင်း/ပြည်ပလုပ်ငန်းရှင်၊ ကုမ္ပဏီများမှ ပေးပို့လာသည့် အဆိုပြုလွှာများ (Expression of Interest – EIO) အပေါ်အခြေခံ ၍ ဒုတိယအဆင့် လုပ်ငန်းအလိုက် Open Tender ထပ်မံခေါ်ယူ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
အညာဒေသ အပင်စိုက်ကြက်သွန်နီများ စတင်နုတ်သိမ်း၊ အထွက်နှုန်းကောင်းသော်လည်း ဈေးမရသဖြင့် အရှုံ?
စည်ပင်ရွေးကောက်ပွဲတွင် လူကြီးများက လူငယ်များကို နေရာမပေးဟုပြောခြင်းကို စိတ်မကောင်းဖြစ်မ??
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ ဒေါ်လာ ၁၈၁ သန်း အကူအညီဖြင့် မုံရွာ-ကလေးဝ-ယာကြီးလမ်းကို နိုင်လွန် ကတ္တရာလမ်းအဖြ
ရန်ကုန် မြို့ပတ်ရထားများ သင်္ကြန်ကာလအတွင်း အကြီးစား ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်မည်
ချိုအာက မွေးနေ့ လက်ဆောင်အတွက် ပရိသတ်တွေကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ဖော်ပြ
မရေမရာ ရှစ်လေးလုံးပြတိုက် မြေနေရာကိစ္စ လာမည့်အပတ် ဆုံးဖြတ်ချက် ချမည်